स्पेनी मा शुभ प्रभात - कसरी स्पेनी मा नमस्ते भन्न को लागी - Vocre
Common words in Spanish: स्पेनिश मा शुभ प्रभात
स्पेनी मा शुभ प्रभात सबैभन्दा सामान्य छ "शुभ - प्रभात!", and is good to say when you first greet someone. "ब्यूनस" राम्रो मतलब, र "दिनहरु" दिन को लागी बहुवचन हो (so it's the same as saying good days). अंग्रेजीबाट स्पेनिश वाक्यांशहरू अनुवाद गर्दै (like 'good morning' in Spanish) एक रमाइलो चुनौती हुन सक्छ — विशेष गरी जब तपाईंसँग आफ्नो शस्त्रागारमा केही सुझाव र चालहरू छन्.
कसरी भन्ने "नमस्ते" स्पनिश मा
It's really easy to say "नमस्ते" स्पनिश मा. It's just "नमस्ते", र यो उच्चारण गरिन्छ "O - La", very easy indeed!
अंग्रेजीबाट स्पेनिश वाक्यांशहरू अनुवाद गर्दै (जस्तै 'शुभ बिहानी’ स्पनिश मा) एक रमाइलो चुनौती हुन सक्छ — विशेष गरी जब तपाईंसँग आफ्नो शस्त्रागारमा केही सुझाव र चालहरू छन्.
स्पेनिश मा सबै भन्दा साधारण शब्दहरू कसरी भन्न जान्न चाहनुहुन्छ? केहि सामान्य स्पेनिश-देखि-अंग्रेजी अनुवादहरू साथै उच्चारणमा सुझावहरू बारे जान्नको लागि पढ्नुहोस्।.
Learn how to say good morning in Spanish and other common Spanish words and phrases.
स्पेनी मा शुभ प्रभात
स्पेनिश मा शुभ प्रभात - सबै भन्दा साधारण “शुभ - प्रभात!” — isagreeting to say when you first greet someone.
“ब्यूनस” राम्रो मतलब, र “दिनहरु” दिन को लागी बहुवचन हो (त्यसैले यो राम्रो दिन भन्न जस्तै हो).
स्पेनिश मा सबै भन्दा साधारण शब्दहरु कसरी भन्न
अंग्रेजीमा धेरै सामान्य शब्दहरू पनि स्पेनिशमा सबैभन्दा सामान्य शब्दहरू हुन्!
के तपाईलाई थाहा छ कि अंग्रेजी र स्पेनिश भाषाहरू पनि दुबै समान शब्दहरू साझा गर्छन्? यसको मतलब तपाईले पहिले नै भन्दा बढी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ 1,000 स्पेनिश शब्दहरू केवल तिनीहरूको अंग्रेजी समकक्षहरू थाहा पाएर.
यस्तो पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजी-स्पेनिस कोग्नेट्स, दुबै भाषाहरूले साझा गरेका यी शब्दहरूमध्ये केही अभिनेता समावेश छन्, civil and familiar — though many of these words are pronounced differently in Spanish than they are in English.
कसरी भन्ने “नमस्ते” स्पनिश मा
स्पेनिश मा सबै भन्दा साधारण शब्द को अर्को एक, यो भन्न साँच्चै सजिलो छ “नमस्ते” स्पनिश मा. यो केबल “नमस्ते”, र यो उच्चारण गरिन्छ, ओहो. साँच्चै धेरै सजिलो!
के तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ स्पेनिश उच्चारण? हाम्रो भाषा अनुवाद एपले तपाईले भन्नु भएको कुनै पनि कुरालाई अर्को भाषामा अनुवाद गर्न सक्छ.
कसरी स्पेनिश मा "अलविदा" भन्न
जबकि स्पेनिशमा 'हाय' जत्तिकै सजिलो छैन, 'अलविदा' भन्न पनि अपेक्षाकृत सजिलो छ. तपाईलाई पहिले नै थाहा होला कि कसरी स्पेनिसमा 'अलविदा' भन्न सकिन्छ, यो शब्द सामान्यतया धेरै चलचित्र र टिभी शो मा प्रयोग गरिन्छ.
अङ्ग्रेजी शब्द ‘गुडबाय’ ले स्पेनिशमा ‘एडियोस’ लाई अनुवाद गर्छ, र उच्चारण गरिएको छ, ah-dee-ose.
स्पेनिश मा "बाथरूम" कसरी भन्ने
अंग्रेजीबाट स्पेनिशमा अनुवाद गर्न अर्को सजिलो शब्द 'बाथरूम' हो।. अंग्रेजीमा जस्तै, यो शब्द ‘b’ अक्षरबाट सुरु हुन्छ, केहि अन्य अंग्रेजी देखि स्पेनिश अनुवादहरु भन्दा सम्झन सजिलो बनाउँदै!
अङ्ग्रेजी शब्द 'बाथरूम' को स्पेनिशमा 'बानो' हो. सोध्न मन लाग्यो भने, "बाथरूमा कहाँ छ?"सरल भन्नुहोस्, “Donde esta el bano.”
जो स्पेनिश बोल्छन्?
स्पेनिस मेक्सिको र स्पेनमा बोलिने भाषा हो, र कुल मा आधिकारिक भाषा हो 20 देशहरू र पहिलो भाषाको रूपमा बोलिने 450 million people worldwide.
स्पेनमा बोलिने स्पेनिशलाई प्रायः क्यास्टिलियन स्पेनिस भनिन्छ. Spanish dialects are mutually intelligible.
स्पेनी भाषा बोल्ने देशमा विदेश यात्रा? अन्तिम-मिनेट यात्राको लागि उत्कृष्ट एपहरू हेर्नुहोस्.
कति देशहरु स्पेनिश बोल्छन्?
स्पेनिश मा आधिकारिक भाषा हो 20 देशहरू, प्रायः मध्य र दक्षिण अमेरिका र एक संयुक्त राज्य अमेरिकामा. क्षेत्र (पोर्टो रिको). अवश्य, स्पेनिश पनि यसको नाम देश - स्पेन को आधिकारिक भाषा हो! साथै, त्यहाँ छन् 59 million Spanish speakers in the United States.
त्यस्ता वक्ताहरूको विश्वका धेरै ठूला डायस्पोराहरूमा स्पेनी वक्ताहरूको संख्या समावेश छ:
मेक्सिको (130 मिलियन)
कोलम्बिया (50 मिलियन)
स्पेन (47 मिलियन)
अर्जेन्टिना (45 मिलियन)
पेरू (32 मिलियन)
भेनेजुएला (29 मिलियन)
चिली (18 मिलियन)
ग्वाटेमाला (17 मिलियन)
इक्वेडर (17 मिलियन)
बोलिभिया (1 मिलियन)
क्युबा (11 मिलियन)
डोमिनिकन गणतन्त्र (10 मिलियन)
होन्डुरस (9 मिलियन)
पराग्वे (7 मिलियन)
मुक्तिदाता (6 मिलियन)
निकारागुआ (6 मिलियन)
कोस्टा रिका (5 मिलियन)
पनामा (3 मिलियन)
उरुग्वे (3 मिलियन)
इक्वेटोरियल गुयना (857 हजार)
पोर्टो रिको (3 मिलियन)
त्यहाँ कतिवटा स्पेनिश भाषाहरू छन्?
किनकी स्पेनिश एक यस्तो व्यापक भाषा हो, यसमा धेरै बोलीहरू छन्. तर धन्यबाद सबै बोलीहरू पारस्परिक रूपमा सुगम छन् - जसको अर्थ एउटै बोलीको वक्ताले फरक बोलीको वक्तासँग बुझ्न र कुराकानी गर्न सक्छ।.
अझै, यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू फरक हुन सक्छन्. युरोपेली स्पेनिश ल्याटिन अमेरिकी स्पेनिश भन्दा धेरै फरक छ, र प्रायः स्पेनमा प्रयोग गरिएका धेरै शब्दहरू ल्याटिन अमेरिकामा प्रयोग गरिएका शब्दहरू होइनन्.
हामी अङ्ग्रेजीलाई स्पेनिशमा अनुवाद गर्ने कुरा गर्दैछौं (र यसको विपरित), we should also note that understanding different dialects of Spanish may not be easy for novices of the Spanish language.
स्पेनिश को बोलीहरु
स्पेनिस संसारभरि धेरै विभिन्न देशहरू र महाद्वीपहरूमा बोलिने भएकोले, there are also many different dialects of this language.
स्प्यानिश बोलिने केहि सामान्य बोलीहरूमा क्यास्टिलियन स्पेनिश समावेश छ, नयाँ मेक्सिकन स्पेनिश, मेक्सिकन स्पेनिश, मध्य अमेरिकी स्पेनिश (कोस्टारिकामा स्पेनिश बोलिन्छ, मुक्तिदाता, ग्वाटेमाला, होन्डुरस र निकारागुआ).
स्पेनिश को यो भिन्नता स्पेन मा आधिकारिक भाषा हो. स्पेनिसको उत्पत्ति यही हो. Castilian को अतिरिक्त, स्पेन सम्बन्धित भाषा बास्क को घर हो, क्याटालान र ग्यालिशियन.
ल्याटिन अमेरिकी स्पेनिश
ल्याटिन अमेरिकी स्पेनिश (नामले सुझाव दिन्छ) ल्याटिन अमेरिका — वा उत्तर अमेरिकामा बोलिन्छ, Central America and South America.
यसमा नयाँ मेक्सिकन स्पेनिस समावेश छ, मेक्सिकन स्पेनिश, मध्य अमेरिकी स्पेनिश, एन्डियन स्पेनिश, Rioplatense Spanish and Caribbean Spanish.
नयाँ मेक्सिकन स्पेनिश
परम्परागत न्यू मेक्सिकन स्पेनिशका धेरै वक्ताहरू स्पेन र नयाँ विश्वका उपनिवेशवादीहरूका सन्तान हुन् जो १६ औं देखि १८ औं शताब्दीमा न्यू मेक्सिकोमा आइपुगेका थिए।.
त्यहाँ कुनै पनि अन्य स्पेनिश बोली भन्दा मेक्सिकन स्पेनिश को अधिक वक्ताहरू छन्. धेरै 20% विश्वका स्पेनिश स्पिकरहरू मध्ये मेक्सिकन स्पेनिश बोल्छन्.
मध्य अमेरिकी स्पेनिश
मध्य अमेरिकी स्पेनिस मध्य अमेरिकामा बोलिने स्पेनिश भाषा बोलीहरूको सामान्य नाम हो. थप स्पष्ट रूपमा, शब्दले कोस्टा रिकामा बोलिने स्पेनिश भाषालाई जनाउँछ, मुक्तिदाता, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, र निकारागुआ.
एन्डियन स्पेनिश मध्य एन्डिसमा बोलिने स्पेनिश भाषाको बोली हो, पश्चिमी भेनेजुएलाबाट, दक्षिणी कोलम्बिया, दक्षिणमा उत्तरी चिली र उत्तरपश्चिमी अर्जेन्टिनाको प्रभावको साथ, इक्वेडर हुँदै, पेरू, र बोलिभिया.
Rioplatense स्पेनिश, Rioplatense Castilian को रूपमा पनि चिनिन्छ, मुख्यतया अर्जेन्टिना र उरुग्वेको रियो डे ला प्लाटा बेसिनमा र वरपर बोलिने विभिन्न प्रकारको स्पेनिश हो।. यसलाई रिभर प्लेट स्पेनिस वा अर्जेन्टिना स्पेनिस पनि भनिन्छ.
स्पेनी भाषा क्यारिबियनमा सन् २०१५ मा पेश भएको थियो 1492 with the voyages of Christopher Columbus.
यो अहिले क्युबामा बोलिन्छ, पोर्टो रिको र डोमिनिकन रिपब्लिक. यो तीन मध्य र दक्षिण अमेरिकी देशहरूको क्यारिबियन तटहरूमा पनि बोलिन्छ, पनामा सहित, भेनेजुएला र कोलम्बिया.
किनभने क्यारिबियनका धेरै टापुहरू पनि फ्रान्सेली उपनिवेशहरू थिए, French is spoken widely in this area of the world as well.
स्पेनिश भाषाको इतिहास
स्पेनिश भाषा भन्दा बढी समयको लागि वरिपरि भएको छ 1,500 वर्षहरु! फ्रान्सेली जस्तै, इटालियन, पोर्चुगिज र रोमानियाली, स्पेनिश एक रोमान्स भाषा हो.
यो भल्गर ल्याटिनबाट आएको हो (गैर-शास्त्रीय ल्याटिन जसबाट सबै रोमान्स भाषाहरू व्युत्पन्न भएका थिए).
मध्य युगको समयमा, मुस्लिम सेनाहरूले इबेरियन प्रायद्वीपमा शासन गरे. उनीहरु भित्र पुगे 711, र मुस्लिम शासन समाप्त भयो 1492. यस कारणले, many words of Arabic origin are in the Spanish language.
क्याथोलिक सम्राटहरू फर्डिनान्ड र इसाबेलाले ग्रानाडालाई सनमा जितेका थिए 1492, restoring Spanish to the country’s official language.
जब स्पेनीहरूले अमेरिकाको यात्रा गरे र "नयाँ संसार" को उपनिवेश गरे।, the Spanish language began to expand across the globe.
अनुवाद गर्न नसकिने स्पेनिश शब्दहरू
धेरै भाषाहरूमा, त्यहाँ शब्दहरू छन् जुन अन्य भाषाहरूमा अनुवाद गर्न सकिँदैन!
सामान्यतया, यी सर्तहरू हुन्, वाक्यांश वा मुहावराहरू जुन अन्य संस्कृतिहरूमा स्थान हुँदैन किनभने तिनीहरू त्यति सान्दर्भिक छैनन्. You can tell what other cultures value based on the words that are untranslatable from their language to another language.
केहि अनुवाद गर्न नसकिने स्पेनिश शब्दहरू समावेश छन्:
एक botellón मूलतः एक ठूलो सडक पार्टी हो. शब्दको अनुवाद 'ठूलो बोतल'. The closest phrase we may have to botellón in English is possibly ‘block party’.
Empalagar ले अंग्रेजी वाक्यांशमा लगभग अनुवाद गर्दछ, 'धेरै मीठो'. This is what you say when something is so sweet that it makes it unenjoyable.
हामी चाहन्छौं कि हामीसँग अंग्रेजीमा puente को लागि एक शब्द थियो! यो शब्दको शाब्दिक अंग्रेजी अनुवाद हो 'ब्रिज', but it also means ‘long weekend’ in Spanish.
सोब्रेमेसाले शाब्दिक रूपमा 'टेबलमा' अनुवाद गर्छ, र यसको अर्थ रातको खाना पछि चिटचट गर्न र कफी वा वाइनमा कथाहरू साझा गर्ने हो (वा दुवै!).
Vergüenza ajena भनेको एउटा शब्द हो जसको अर्थ तपाईं अरू कसैको लागि लज्जित महसुस गरिरहनुभएको छ — जुन कहिलेकाहीँ आफ्नो लागि लज्जित महसुस गर्नुभन्दा बढी पीडादायी हुन सक्छ।!
तपाईलाई मनपर्ने अनुवाद गर्न नसकिने स्पेनिश शब्दहरू के हुन्??
प्रसिद्ध स्पेनी वक्ताहरू
किनभने संसारभरि धेरै स्पेनिश स्पिकरहरू छन्, यसले अर्थ दिन्छ कि त्यहाँ धेरै सेलिब्रेटीहरू पनि हुनेछन् जसको पहिलो भाषा स्पेनिश थियो, पनि!
केहि सबैभन्दा प्रसिद्ध स्पेनिश स्पिकरहरू (जीवित र मृत दुवै) समावेश:
शब्दहरू कसरी उच्चारण गर्ने भनेर सिक्न थोरै मद्दत चाहिन्छ वा तपाईंको शब्दावलीको साथ केही सहयोग चाहिन्छ? Vocre डाउनलोड गर्नुहोस्, मा हाम्रो भाषा अनुवाद एप एप्पल स्टोर वा गुगल प्ले स्टोर!
अफलाइन हुनुहोस् (वा अनलाइन) अंग्रेजी देखि स्पेनिश अनुवाद. हामी पाठ प्रस्ताव गर्दछौं, आवाज, and voice-to-text translation.
स्पेनिश मा सबै भन्दा साधारण शब्दहरू सिकेर, तपाईं कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ — तपाईं स्प्यानिस धाराप्रवाह बोल्नुहुन्न भने पनि.
सबै ब्लग हेर्नुहोस्
Vocre अब प्राप्त गर्नुहोस्!
© Vocre 2020. सबै अधिकार सुरक्षित
हामी तपाइँको प्राथमिकता सम्झना र तपाइँको भ्रमण दोहोर्याएर सबै भन्दा सान्दर्भिक अनुभव दिनको लागि हाम्रो वेबसाइटमा कुकीहरू प्रयोग गर्छौं. "स्वीकार" क्लिक गरेर, तपाइँ सबै कुकीहरू को उपयोग गर्न सहमत हुनुहुन्छ.
सुरक्षित गर्नुहोस् र स्वीकार गर्नुहोस्